Taiwan neBurkina Faso dzinoputsa hukama hwehukama pakati pekumanikidzwa kweChina
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Taiwan neBurkina Faso dzinoputsa hukama hwehukama pakati pekumanikidzwa kweChina
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Burkina Faso Breaking Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Taiwan Kupwanya Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Dai 24, 2018
Taiwan yaputsa hukama neBurkina Faso mushure mekunge nyika yeAfrica yati yakanga yadimbura hukama nenyika dzekuzvitonga, Gurukota rezvekunze kweTaiwan, Joseph Wu akadaro neChina.
Wu akataura kuzvidemba nechisarudzo ichi, uye akawedzera kuti Taiwan haigoni kukwikwidzana nemari yeChina.
China inoti chitsuwa hachina mvumo yekudyidzana zviri pamutemo nenyika yekunze.
Taiwan neChina vakakwikwidza simba pasirese kwemakumi emakore, kazhinji vachirembera mapakeji erubatsiro pamberi penyika dzine hurombo.
Burkina Faso ndiyo nyika yechipiri kusiya Taiwan mukati memavhiki. Dominican Republic yakachinjira kuBeijing kutanga kwemwedzi uno, ichisiya chitsuwa ichi chiine vamiriri vezvematongerwo enyika gumi nemasere pasirese.
Mutungamiri weTaiwanese Tsai Ing-wen akati matanho ekuchamhembe kweChina anoteera "kufambira mberi kuchangobva kuitika pachiyero pahukama hwehupfumi nekuchengetedzeka neUS nedzimwe nyika dzakafanana".
“[Mainland] China yabata pfungwa dzevanhu veTaiwan. Izvi hatichazvishiviriri asi tichave takatsunga kusvika pasirese, ”akadaro Tsai.
Akawedzera kuti Taiwan yaisapinda mumadhora ekudyidzana - ichidonhedza vanobatana navo nemari yekubatsira - mukukwikwidzana nenyika yakaoma.
Izvo hazvina kunyatso kujeka kana Burkina Faso neBeijing vaizoumba hukama hwezvematongerwo enyika asi Wu akati zvinogona kungova "munguva pfupi kana kuti gare gare" uye kuti "munhu wese anoziva [mainland] China ndiyo chete chinhu".
KuBeijing, gurukota rezvekunze rakataura muchirevo kuti rakabvuma danho reBurkina Faso.
"Tinogamuchira Burkina Faso inopinda muChina-Africa mushandirapamwe pamwe nekukurumidza sezvinobvira pachishandiswa mutemo weChina," akadaro mutauriri Lu Kang.